मरेका व्यक्तिको लिङ्ग र अन्डकोशले देखायो कमाल, मृतकको लिङ्ग पुनः काम गर्न सक्षम | Rajmarga
मरेका व्यक्तिको लिङ्ग र अन्डकोशले देखायो कमाल, मृतकको लिङ्ग पुनः काम गर्न सक्षम
कुनै स्थानमा भएको बम विष्फोटमा हात वा खुट्टा गुमेको र डाक्टरहरु–मेडिकल साइन्सको चमत्कारले त्यसलाई पुनः जोडेका खबर धेरै आउने गर्दछन् । कुनै दुर्घटनामा कसैको अनुहार खराब भएको थियो, त्यसलाई प्लास्टिक सर्जरीको सहयोगमा पुनः बनाएको खबर पनि आउने गरेकै छ।
यस्ता खबर तपाई हामीले कयौपटक पढिसकेका छौ, सुनिसकेका छौ, आगामी दिनमा पनि पढ्नु र सुन्नेपर्ने नै छ। तर अहिले एउटा यस्तो खबर आएको छ, जुन पढेर तपाई पनि आश्र्चयमा पर्नुहुनेछ । यस्तो खबर न त अहिलेसम्म तपाईले पढ्नु नै भएको थियो न त आगामी दिनमै शायदै पढ्नुहुनेछ ।
अमेरिकी डाक्टरहरुको एउटा टिमले संसारमै पहिलोपटक पेनिस (लिङ्ग) र स्क्रोटम (अन्डकोश) ट्रान्सप्लान्ट गरेर देखाएका छन् ।
मेरिल्याण्ड, बाल्टिमोरका जन हाँपकिंस युनिभर्सिटीका सर्जनले अफ्गानिस्तानमा भएको बम विष्फोटमा घाइते भएका एक सैनिकको अपरेशन गरे ।
कसले दियो लिङ्ग ?
यो अपरेशनका लागि लिङ्ग, अन्डकोश र एब्डोमिनल वाल एक जना यस्तो दाताबाट लिइएको थियो, जसको निधन भइसेको छ । यसो भनिँदैछ कि यी सैनिक एकपटक पुनः यौन सम्बन्ध कायम गर्न सक्षम हुने भएका छन् । यद्यपि लिंग रिकन्स्ट्रक्शनका साथ यो सम्भव हुँदैन ।
यो सर्जरी २६ मार्चमा भएको थियो र ११ जना डाक्टर सहभागी अपरेशन १४ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म चलेको थियो । यो पहिलो अपरेशन हो, जसमा अन्डकोष र वरपरको ऐब्डोमिनल क्षेत्रसमेत टिश्युको पूरा सेक्सन ट्रान्सप्लान्ट गरिएको छ।
डाक्टरहरुका अनुसार अंग दान गर्ने व्यक्तिका ेटेस्टिकल्स ट्रान्सप्लान्ट गरिएको छैन । जन हाँपकिंस युनिभर्सिटीका हेड अफ प्लास्टिक एन्ड रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी डाक्टर ढब्ल्युपी एन्ड्रयुले भने–केही घटनामा अंग काट्नु पर्दछ र त्यो सबैले सफा देख्छन् । तर युद्धका केही यस्ता घाउ हुन्छन्, जसका बारेमा अरुलाई अनुमान पनि हुँदैन ।
यी सैनिकको परिचन जारी गरिएको छैन । उनले युनिभर्सिटीको तर्फबाट जारी वक्तव्यमा भनिएको छ–जब म ब्युँतिएँ तब महशुस भयो कि पहिलाभन्दा बढी सामान्य भएको छ, अब म ठिक छु ।
कसरी भएका थिए घाइते ?
यी सैनिकले अफ्गानिस्तानमा भुलबस एउटा बममा खुट्टा राखेका थिए ।
मेडिकल भाषामा यो अपरेशनलाई वास्कुलराइज्ड कम्पोजिट एलोट्रान्सप्लान्टेशन भनिन्छ यसको अर्थ यो हो कि यो प्रक्रियामा छाला, हड्डी, मांसपेशी, टेन्डल र ब्लड वेशल (रक्त वाहिकाहरु)–सबै परिवर्तन गरिन्छ ।
सर्जिकल टिममा सहभागी डाक्टरका अनुसार सैनिक ६देखि १२ महिनामा पूर्णरुपमा ठिक हुने छन् । जेनिटुरिनरी ट्रान्सप्लान्ट प्रोग्रामका क्लिनिकल निर्देशक डाक्टर रिक रेडेटले भने कि सैनिकको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ, उनी यो हप्ता अस्पतालबाट घर फर्कन सक्छन् ।
सन् २०१६ मा अमेरिकामा पहिलो लिङ्ग ट्रान्सप्लान्ट २०१६ मा बोस्टनको मैसाच्युसेट्स जलरल अस्पतालमा गरिएको थियो । र, सन् २०१४ मा दक्षिण अफ्रिकाका डाक्टरहरुले संसारमै पहिलोपटक लिङ्ग ट्रान्सप्लान्ट गरेका थिए। बीबीसी हिन्दी
Previous post: राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कँडेल नियुक्त
Next post: केही दिनघि नै मरेका व्यक्ति उठेर–‘गल्तीले यमराजले लगेका रहेछन्’ भनेपछि मच्चियो बबाल
९ सचिबको सरुवा, कस्को कहाँ भयो पदस्थापन?